“Qurbejoogow, u tudha Qolqol-joogga dalkooda Kabkabtay oo Fidno ha gelin” La-taliyaha M/weynaha ee Nabadeynta Gobollada Bari |
“Qurbejoogow, u tudha Qolqol-joogga dalkooda Kabkabtay oo Fidno ha gelin” La-taliyaha M/weynaha ee Nabadeynta Gobollada Bari
La-taliyaha Mafaxweynaha Somaliland ee Arrimaha Bariga, Eng Cabdinasir Garaad Abshir, ayaa Qurbejoogga dalka ku sugan ku eedeeyey inay hormood ka yihiin hab-dhaqanno bulshada kala fogeynaya oo inta badan lagu baahiyo. Baraha Bulshada iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan xilligan xaasaasiga ah ee Doorashada lagu jiro.
Eng Cabdinasir waxa uu ugu baaqay Qurbejoogga dalka ku sugan inay u tudhaan oo aanay ku dheelin tacabka muwaadiniinta gudaha ku sugani dalkooda gashadeen maadaama ay iyagu ubadkoodii iyo xaasaskoodii Qurbaha kaga yimaaddeen. Waxa uu Bulshada ku booriyey inay dhinac uga soo wada jeestaan hab-dhaqannadaas foosha xun ee layskaga horkeenayo oo uu sheegay in dano gaar ah laga leeyahay.
Eng Cabdinasir Garaad Abshir oo arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi;
“Waddanka waxa yimi ilaa 20Kun oo qurbejoog ah oo labada dhinac
Waxaan leeyahay Qurbejoogow qolqol-joogga fidno ha gelin. Labada dhinacba (mucaarad iyo muxaafad) waxay intaa u ordayaan xilal ay raadsanayaan.
Anigu qurbejoog baan ahoo Raggaas waan wada garanayaa. Nin carruurtiisii iyo xaaskiisii London kaga yimi, inuu halkan qalalaase ka abuuro maaha wax laga yeelayo.”
“Qoladaas waxaan leeyahay ka daaya dhibaatada Qoqol-joogga, in doora ayaad ka maqnayde, dhibaatadii ay hore isaga hagaajiyeen ee ay ka soo gudbeen, dib ha ugu celinina. Qolada halkani (Qolqol-joog) waxan (Doorashada) waxba uma arkaan oo way iska yaqaanaan, laakiin qolada Qurbejoogga ahi waa ka dhab oo waxay moodayaan wixii Yurub lagu samaynayay.” Sidaas ayuu yidhi La-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Nabadeynta Gobollada Bari.
Isaga oo hadalkiisa sii watay, waxa uu intaas ku daray oo yidhi, “Edeb-darrada jirtaa waxay tahay iyagoon codeynayn oo aan kaadhadh haysan, ayay telefishannada ka hadlayaan, oo Social Media-ha (Baraha Bulshadu ku xidhiidho) ku qorayaan wax akhlaaqadda iyo dhaqanka ka fog oo bulshada wada-dhalatay isku diraya.”
“Markaa waxaan leeyahay, waar qurbejoogow joojiya hadallada xanafta leh eed waddaan oo dalka u tudha. Waayo dhalinyaradan yaryar ee qolqol joogga ah way saamaynaysaa, marka nin weyn oo Qurbejoog ahi uu u hadlo sidii 90maadkii.” Sidaas ayuu Yidhi Eng Cabdinasir Garaad Abshir.
Ugu Dambayntii, Eng Cabdinasir Garaad waxa uu bulshada iyo taageerayaasha xisbiyadaba ugu baaqay inaan laga hordhicin oo la sugo go’aanka Guddiga Doorashooyinka.